Internet Download Manager — MYSTERY ZILLION
May 2009 edited January 2010 in Sharing
IDM V 5.17 ပါ ။ IDM ကို လူတိုင်းသုံးဘူးနေလို့ဘာကောင်းသလဲတော့ကြောတော့၀ူး ...
အကို ရန်မျိုးအောင် ရေ လိုချင်လို့ ဒေါင်းတာ မရဘူး ဖြစ်နေတယ် ရနိုင်မယ့်နေရာလေး ရှိရင် ပြောင်းပေးပါလား ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကျွန်တော်က စက်ကသာ ဟောင်းနေတာဗျ ဆော့စ်ကို နောက်ဆုံးပေါ် အသစ်လေးတွေပဲ လိုက်ချင်လို့ပါ
်Full Version ပေးပါလား..ဘာမှမတောင်းမဲ ့ဟာမျိုးပေါ ့...
serial key တောင်းလိုက်..patch file တောင်းလိုက်နဲ ့...စိတ်ညစ်လို ့ပါဗျို ့.
ThuRain wrote: »
ရှေ့ကပိုစ့်မှာတင်ပေးထားတာက ကိုရန်မျိုးအောင်တင်ပေးထားတဲ့ဖိုင်ကို ပြန်တင်ပေးထားတာပါ ။ ကိုရန်မျိုး
အောင်တော့ဘယ်လိုသုံးလဲမသိဘူး ။ key gen (or) crack file ဘာမှမပါဘူးဗျ ။ အခုကျွန်တော်သုံးနေတဲ့
ဟာကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ် ။ IDM 5.17.2 full version ပါ ။
ကျနော်လဲ OK သွားပြီ ...
ဘန်းကျော်မှာက ifile.it တစ်ခုပဲကောင်းကောင်း ရတာ ...
အဆင်မပြေတဲ့ သူများတွေကိုလဲ ရွှေလမ်းညွှန်လုပ်ပေးလိုက်တယ် ...
Internet Download Manager v5.18 Build3Portable
ဒါနဲ့ ကျွန်တော် IDM မသုံးတတ်သေးဘူးဗျ..:D..။
ဒေါင်းမယ့် Link ကို ထည့်လိုက်ရင်
အခုလို ဖိုင် Size ကို 100MB ကို 13.10 KB ဆိုတာမျိုးပြတယ်ဗျာ.. Start Download လုပ်ရင်လဲ Icon လောက်ပဲ ကျလာတယ် အဲဒါဘယ်လို လုပ်ရမလဲဟင်..။ ဘာမှားနေလဲဟင်..။
Rapidshare က Premium နဲ့လောက်ပဲ ဒေါင်းလုပ်ဆွဲတာက အဆင်ပြေတယ်ခင်ဗျ..
ိုရိုးရိုး User နဲ့ဆိုရင် မရဘူးခင်ဗျ.. အဲဒါကြောင့်ဖြစ်မယ်ထင်တယ်..
ှုIDM portable လေးလုပ်ပါဦးဗျာ ကျေးဇူတင်ပါတယ် :77::77::77:
Repaid Share တင်မဟုတ်ဘူးဗျ။ ..Add URL ကနေ ဘယ်လင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီလိုပဲဗျ ..။ ကျွန်တော် ဘာမှားနေလဲ မသိဘူး:(( ..။
ဒါနဲ့.. တင်ပေးထားတာ ၂ မျိုးလုံးလေ..။ Full ရော Portable ရောလေ..။
သာမန်အားဖြင့်တော့ IDM က FFox မှာ Add On ထည့်ပေးသွားပါတယ်.. ပြီးတော့ IDM က Option က File Type မှာ ပါတဲ့ Extension တွေနဲ့ အတိုင်း အော်တိုမက်တစ် ဒေါင်းလုပ်ချပေးသွားပါတယ်..
Add URL နဲ့ကတော့ တစ်ခါမှ ဒေါင်းလုပ်မချဘူးပါ :S
ကျွန်တော်နဲ့ IDM ကတော့ အဆင်မပြေပါဘူးဗျာ..:2:။ Software ကြောင့်လားဆိုပြီး တခြားနေရာ တွေက IDM ပါ ဒေါင်းပြီးသုံးကြည့်တာ လဲ မရပါဘူး..။ Youtube ကဒေါင်းလဲ ဒီလိုပဲ။ တခြား version တွေလဲဒီအတိုင်းပဲ..။ တခုခုတော့ မှားနေပါပြီ..။
ကျွန်တော်က ပုံမှန်အားဖြင့် သိပ်ပြီး download မလုပ်ဖြစ်ဘူး..။ လုပ်ရင်လဲ ရိုးရိုးပဲ ဒေါင်းတယ်.။ အဲတော့ Software တခုလုံး Install လဲလုပ်မထားချင်။ တခါတလေတော့ ဖိုင် ဆိုဒ် ကြီးတာတွေ ဥပမာ- MS Office တို့ ရုပ်ရှင် တို့ လိုချင်ရင် RapaidShare ကဆိုရင် တစ်ခါ ဒေါင်းပြီးတိုင်း ၁၅ မိနစ်လောက် စောင့်ရတယ်လေ ..။
ဒီတော့ အပိုင်း ၁၀ ခုလောက် ဆိုရင် တခြားအလုပ် လုပ်မရတော့ဘူး ..။ ၁၅ မိနစ်ပြည့် တိုင်း ခလုပ် သွားသွား နှိပ်နေရတယ်။ ဖြစ်ချင်တာက ဒေါင်းမယ့် လင့် တွေ တန်းစီ ထည့်ထား အချိန်တန်ရင် သူ့ အလိုလို ဒေါင်းစေ ချင်တာလေ ..။ တစ်ခုဒေါင်းလိုက် စောင့်နေလိုက်နဲ့ Auto ပေါ့ ကိုယ် သွားချင် ရာသွား အချိန်တန်ရင် အကုန်ဒေါင်း ထားပြီးသား ဖြစ်စေချင်တာ..။ Software ကလဲ Portable ပဲလိုချင်တာ ..။ ဒါနဲ့ လျှောက်ပြီး စမ်းသပ် ကြည့်တော့ Universal Share Downloader နဲ့အဆင်ပြေတယ်..။ Portable လဲဖြစ်တယ်..။
ဖိုင်ဆိုဒ် ကတော့ ..14 MB ရှိတယ် ။ သုံးရတာလဲ လွယ်တယ်..။ ကျွန်တော်နဲ့ အဆင်ပြေ ပေမယ့် တခြားသူနဲ့ တော့ မသိဘူးနော်..။
အကိုရေ www.9down.com မှာရှာကြည့်လိုက်ပါဗျာ
ဘရားသားရေ နောက်ကြသွားတယ်.. Sorry ခုမှဒီ post ကိုတွေ့လို့ .. IDM portable 5.18 ပါ..
RS ကအဆင်မပြေဘူးဆိုရင် ..
[URL]http://www.mediafire.com/download.php?wj2gwhmimqt[/URL]  Install ver
ကို ThuRain အတွက် rlay ဖြေထားတာက IDM အတွက်ထင်တယ်..။ကျွန်တော်တင်ထားတာ အားလုံး ifile ကလေ IDM က full ရော portable ရောတင်ထားပါတယ်..။ Universal Share Downloader ရော အကုန် ပြန်ဒေါင်း ကြည့်တာ ရပါတယ်..။
လာပါပြီဗျာ ... multiupload link လေးနဲ့
Internet_Download_Manager_5.18_Build_3_Portable.rar (5.94 MB)
ှုIDM PORTABLE တွေမှာ ဒေါင်းပြီးသွား၇င် temp file error cannot be saved ဆိုပြပြီး
အကုန်ပျောက်သွားတာဘာကြောင့်ပါလဲဗျာ save မဲ့ temp ဖိုင်ကို d: အောက်ကိုရွှေ့လဲ ဒီလို error ပဲပြပြိး ဒေါင်းလို့အဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေတယ်ဗျ ။ 5.17 portable ကတည်းကဖြစ်နေတာ
အရင်တုန်းက beta version တွေသုံးခဲ့ဖူးပုံရပါတယ် .. ဒါမှမဟုတ်လဲ .. Install version နဲ့ .. portable တွေနှစ်ခုလုံးထပ်သုံးမိရင်လဲဒီလို .. temporary error တွေ ပေါ်တတ်ပါတယ်.. မဖြစ်မနေ အခြေအနေကလွဲရင် ..ဖြစ်နိုင်ရင် .. portable တွေမသုံးပါနဲ့ install version တွေတင်သုံးနိုင်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပါဘဲ .. ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ .. portable တွေက အရမ်းကို လျှော့ချစွာနဲ့အလုပ်လုပ်ကြတဲ့အတွက် အဆင်မပြေမှုတွေ အများကြီးရှိနိုင်ပါတယ် .. IDM ကိုလုံး၀ဖြုတ်ချပြီး .. chache တွေ registry တွေရှင်းပြီး .. restart လုပ်ပြီး .. 5.18 install version တင်ပြီးတစ်ချက်သုံးကြည့်ပါ..
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာဖြစ်နိုင်တယ်ဗျ။ဒါပေမဲ့ full version install လုပ်လို့မ၇ဘူးဗျ။users တွေတအားဒေါင်းကြတော့ တဆိုင်လုံးကွန်နက်၇ှင်တွေထိုးထိုးကျလို့ လန့်နေလို့။။
အဲဒါကြောင့် portable သုံးတာ idm ကိုယ်လိုချင်တဲ့ဟာလေးဆွဲဖို့လေ:D:D
ကျွန်တော်ကဟိုတနေ ့က idm လေးနဲ့hiren boot cd 10 ကိုဆွဲတာ ရမယ်တောင်မထင်ဘူး ဟိုက ၁၉၃ မက်လောက်ရှိမယ်ထင်တယ် အဲဒါ တစ်နာရီအတွင်းရသွားတယ် ယုံတောင်မယုံနိုင်ဘူး download speed ကတစ်ခါတစ်ခါ 1MB အထိရောက်ရောက်သွားတယ် :D:D
ကယ်လားဟင် ဘယ်နိုင်ငံကဆွဲတလဲဟင် မြင်ချင်စမ်း ကြုံဖူးချင်စမ်းလိုက်တာဗျာ အဲဒီ speed
(:(( မသေခင်တော့မြင်းဖူးသွားကောင်းလောက်ပါတယ် :D ကျွန်တော်က ကိုမိုးဇက်ကိုတင်ပေးမဲ့ pro version ကိုစောင့်နေတာဗျ လက်တို့လိုက်ကြဦးနော်
IDM v5.18_Build_3_Portable ဒေါင်းတာမရလို့လားမသိဘူး တစ်ခြားတစ်နေရာကနေထပ်တင်ပေးလိုက်တယ်နော်...
IDM v5.18 Build4(Portable)
ဒီတခါတော့ Multiupload လေးနဲ့ တင်လိုက်တယ်။..
ကြိုက်ရာက ယူလို့ ရအောင်
IDM 5.18.4 Download
IDM v5.18.5 ရိုးရိုး
Portable IDM v.5.18.5 ပေါ်တေဘယ်
ဟုတ်တယ် ...ကျွန်တော်လဲအဲလိုဖြစ်နေလို ့.......ဘယ်လိုမှဒေါင်းလို ့မရဖြစ်နေတယ် :14: :14:
rapidshare မှာတော့မရ ဘူးထင်တယ်ခင်ဗျ
IDM - download - option - general မှာ သွားပြီး ကိုယ် သုံးမ ဲ့ browser ကိုcheck mark
လုပ် ပေး ပြီး ဒေါင်းကြည့်ပါလား
idm က rapid share က ဒေါင်းလို့ မရဘူးဗျ premium သမားတွေပဲရတာ free လုပ်တဲ့ သူတွေမရဘူး
idm က uploadind,mediafire တို့လောက်ပဲရတော့တယ် ဒါတောင်တခါတလေမရဘူးဗျ
့hotfile မှာတော့ ရတယ်
idm နဲ့ ဒေါင်းလို့ရတဲ့ ဆိုက်တွေက နည်းတယ်
တခါတလေ ဆွဲလို့ရရင်တောင် မှ pause လုပ်လို့မရဘူ း
ကျွန်တော် လည်း အရင်က Idm နဲ့ ဆွဲနေကျပါ အခုတလော့ ဆိုက်တွေက idm နဲ့ သိပ်မရတော့ဘူးဗျ
idm နဲ့ rapidshare ကို ဒေါင်းလို့ရပါတယ်။ free ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ premium ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ။ premium ဆိုရင်တော့ site logins မှာ account & password ထည့်ထားပေးရမယ်။ Browser တွေမှာတော့ idm add-on တော့ရှိရမှာပေါ့။
Internet Download Manager Full version နောက်ဆုံးထွက်ကို ကျွန်တော် တင်ပေးထားပြီးသားရှိပါတယ်.။ Ko Ko Win's Sharing အောက်မှာပါ.။ ပို့စ်တင်မယ်ဆိုရင် သေချာရှာစေချင်ပါတယ်။ တင်ပြီးသားတွေ ပြန်တင်သလို ဖြစ်နေပါတယ်။
ရက် ၃၀ ပဲ free တဲ့ဗျ... လုပ်ကြပါဦး. . serial key လေး မစကြ ပါ...
အဲတာ link ပျက်နေတာဖြစ်ဖြစ် server ပေါ်မှာ file မရှိရင်ဖြစ်ဖြစ် ဖြစ်တတ်ပါတယ်၊ ပြီးတော့ connection ကြောင့်လဲဖြစ်တတ်ပါတယ်
IDM က သုံးလို့တော်တော် ကောင်းပါတယ်
link, server ပေါ်မှာ file ရှိရင် စောင့်ပြီး ခလုတ်နှိပ်စရာမလိုပါဘူး URL သာ သေချာအောင် add ထားပြီး ထားခဲ့ပါ သူ့ပါသာ ဆွဲပါလိမ့်မယ်..
အခုက အဲ့ဒီ idm ကို uninstall လုပ်ပြီးပြီ.. ဒါပေမယ့်.. သူက run နေသေးတယ်.. error page နဲ့ကို တစ်ခုခုဒေါင်းမယ်ဆို ပေါ်လာတယ်.. ဒါကြောင့် ဒီကောင်ကို အပြီး reg မှာပါ ဖြတ်ချင်တယ်.. ဘယ်မှာဒီကောင် နေရာ၀င်ယူနေသလဲရှာတာ ခေါင်းမူးနေပြီ.. ဟူး.. လုပ်ပါဦး.
ဒါမှ အသစ်ပြန်တင်မှ အဆင်ပြေမှာ..မဟုတ်ရင်.. မရ ရေးချာ မရ ပဲ..
pole1star1 wrote: »
IDM ကိုပြန်သွင်းပြီး uninstaller တစ်ခုခုနဲ့ဖြုတ်ကြည့်ပာ။ ကျွန်တောှကတော့ Revo unistaller သုံးလို့အဆင်ပြေမယ်ထင်ပာတယ်။
Isn't it because you r downloading the webpage????
မနေ့က new in version 5.18 build7(Jan 20, 2010) မှထွက်တာပါ...။